विजया दशमीको शुभकामना! कसरी मनाउनु भयो? – MySansar
विजया दशमीको शुभकामना! कसरी मनाउनु भयो?
Posted on October 14, 2013 October 15, 2013 by Salokya
भारतको तटीय क्षेत्रमा आएको चक्रवातको प्रभावले हिजैदेखि नेपालका अधिकांश भागमा पर्न थालेको पानीका बीच यस पटक हिले दशैँ मनाइँदैछ। दशैँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन विजया दशमी सोमबार मान्यजनबाट टीका र आशिषसहित मनाइँदैछ। पानीले बाधा पुर्‍याए पनि रोक्न सक्ने कुरा पक्कै हैन यो। तपाईँले चाहिँ आफू बसेको ठाउँमा कसरी दशैँ मनाउनु भयो ? आफ्नो अनुभव तल कमेन्टमा लेख्नुहोस्। आफ्नो वा आफूले खिचेका टीका, जमरासहितको फोटो बाँड्न चाहनुहुन्छ भने माइसंसारको फेसबुक पेजमा अपलोड गर्नुस्। राम्रा फोटोलाई माइसंसारमा समेत राखिनेछ। फोटो पठाउन यहाँ क्लिक गर्नुस्।
तपाईँहरुको दशैँ शुभ होस्। सबको मंगल होस्, सबको कल्याण होस्, भलो होस्। शुभकामना !
दक्षिण कोरियाबाट सुशील देवकोटाले पठाएका फोटो-
हामी दक्षिण कोरियाको योंसे विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधी गरिरहेका नेपालीहरु हौँ। मच्चिने पिङ्ग तथा जमराको कमी भए पनि, उल्लास तथा हर्षमा कुनै कमी नराखी हामीले यसपटकको दशैं खुशीका साथ मनायौँ। हाम्रा हर्षका यी पलहरु माइसंसार ब्लगमार्फत् संसारका सम्पूर्ण नेपालीहरुसंग साट्न चाहन्छौँ-
पोर्चुगलमा यसरी मनाइयो दशैँ। अमृत पौडेलको फोटो।
राम गहतराजले पठाएको युकेको दशैँको फोटो।
मलेसियाको दशैँ: रमेश पान्डेको फोटो।
इन्स्टाग्राममा #tika का फोटो-
4 thoughts on “विजया दशमीको शुभकामना! कसरी मनाउनु भयो?”
दशै तिमी खुशीयाली लिइ आयौ ।
तिमी जहाँ छौ त्यहाँ उज्यलो छ,
तर म अन्ध्यरोमा छु ।
सपनिमा तिमीलाई देखे,
मेरा आमा बुवा सँग रमाउदै थियौ ।
आधिरातमा ब्युझी हेरे,
तिमी त एक्कासी गायब भयौ ।
परदेशी को पिदा हो यो,
बुझ्न अलि गार्हो नै छ ।
गाउँघर को याद बोकि,
बस्न अलि साह्रो नै छ ।
बध्यता हो यो मेरो,
रहर भन्ने नठान्नु है ।
मेरी आमा मेरो यादमा,
दुख धेरै नमान्नु है ।
बुवा मेरो मर्म बुझ्ने,
भाइहरुमा मेरो मुहार देख्नु ।
बुढा मेरा बजे बोइ,
नातिलाई आशिष दिनु ।
तिमी जहाँ छौ त्यहाँ उज्यालो छ,
तर म अध्यारो म छु ।
मार्मिक भाब पोख्नु भो भूबन जी ले .
दिवाकर ज्ञवालीजी को फोटोले हसायो !
दिक्क लाग्ने बेलामा यस्तै यस्तै फोटोहरु हेर्नु पर्छ 🙂 हाँसो आउछ — हाँसो आउनु
स्वास्थ्यको लागि आबश्यक हुन्छ ——–
सबैलाइ दशैँ लाग्यो आफुलाई त दशा लाग्यो !
सबैको खुशी आयो आफ्नो त खुशी भाग्यो !!
कर्म खोटो ,निराषता अनि उराठमय भाग्य
कुल्ची मारी गाडेको दशा फेरी बिष पिएर जाग्यो !!!
फेरी एकथरीले हिन्दु हरुको दशैंमा हामी अहिन्दु मंगोल को बच्चाको फोटोमा टिका लाएर के गर्न खोजेको भन्लान ! सबैलाई दशैं को शुभकामना !